Calool-celinta gastroesophageal, waa maxay cuntooyinka ay tahay inaad iska ilaaliso | Bezzia
Tony Torres | 09/05/2022 16:00 | Cudurada
Gastroesophageal reflux waa cudur saameeya habka dheefshiidka. Tani waxay saamaysaa habka loo assimilation cuntada inta lagu jiro dheefshiidka, mar haddii aanay cuntadu si sax ah caloosha ugu soo gaadhin hunguriga. Tani waxay ku dhacdaa natiijada isbeddelka ku yimaadda waalka kaas oo nidaaminaya marinka waxa hungurigu ka kooban yahay caloosha.
Marka uu waalkani si sax ah u hagaajin waayo ama uu si khaldan u dabci waayo, waxa loo yaqaan reflux-ku dhacaa. Yacni, qayb ka mid ah cuntada la cunay ma gaadho caloosha oo waxay ka soo noqotaa hunguriga ilaa afka. Waa maxay waxay keeni kartaa dhaawac badan heerka dheefshiidka, maadaama xuubabka xuubka ay xanaaqsan yihiin iyo noocyada kale ee calaamaduhu waxay dhici karaan natiijada.
1 Cuntooyinka la iska ilaaliyo haddii aad qabtid gastroesophageal reflux
1.1 Qaxwaha iyo cabitaannada kafeega leh
1.2 Xawaash iyo kulul
1.3 Cabitaanka khamriga
1.4 Mint iyo cuntooyinka dhadhanka reexaanta oo kale ah
1.5 Talooyin kale si looga fogaado dib u soo noqoshada gastroesophageal
Cuntooyinka la iska ilaaliyo haddii aad qabtid gastroesophageal reflux
Marka takhtarka takhasuska leh uu go'aamiyo inaad qabtid gastroesophageal reflux, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la go'aamiyo waxa sababay. Xaalado badan tani waxaa sababa miisaanka xad-dhaafka ah, taas oo kiiska ugu muhiimsan uu noqon doono la qabsiga cunto dhimista miisaanka si loo xalliyo tan iyo dhibaatooyinka kale ee suurtogalka ah. Haddii dhibaatadu soo muuqato habeenkii, guud ahaan waxaa lagu talinayaa in cuntada ugu dambeysa la cuno ugu yaraan 3 saacadood ka hor intaadan seexan.
Isbeddellada caadooyinka aad bay muhiim u yihiin sababtoo ah waxay kaa caawin karaan yaraynta calaamadaha reflux gastroesophageal. Intaa waxaa dheer, dhakhtarku wuxuu kugula talin doonaa cunto ku habboon baahiyahaaga taas oo looga fogaado dib-u-soo-celinta iyo cawaaqibka ka yimaada. Waxa kale oo muhiim ah in laga fogaado alaabooyinka iyo cuntooyinka qaarkood taas oo ay sabab u tahay qaybahooda ay kordhin karaan reflux gastroesophageal, sida kuwan soo socda.
Qaxwaha iyo cabitaannada kafeega leh
Marka lagu daro kororka aysiidhka caloosha, cabitaanada kafeega leh iyo kafeega, xitaa decaf, ayaa kicinaya oo awood u leh. wax ka beddelka dheefshiidka ee qalab hore u dhaawacmay. Sababtan awgeed, waxaa muhiim ah in la iska ilaaliyo isticmaalka alaabta ay ku jirto maaddadan, gaar ahaan kafeega. Taa beddelkeeda waxaad isku dayi kartaa faleebooyin sida rooibos ama chamomile, taas oo dejinaysa oo ka caawisa dheefshiidka.
Xawaash iyo kulul
Guud ahaan, haddii aad qabtid gastroesophageal reflux, waa inaad ka fogaataa wax kasta oo cunto ah iyo wax soo saarka oo ka xanaajin kara darbiyada hunguriga. Waxaa ka mid ah xawaashka, basbaaska kulul, dufanka iyo cuntooyinka shiilan, cuntooyinka soo saara aysidhka sida yaanyada, miraha liinta, shukulaatada ama kafeega. Ka fogow cuntooyinkan ku jira cuntadaada si aad u yarayso ashitada cuntada ka dib.
Khamrigu haba yaraatee uma roona dadka la ildaran reflux gastroesophageal, gaar ahaan kuwa khamriga ah ee ka yimaada halsanosida biirka ama khamriga. Sababta ayaa ah in ay kordhiyaan wax soo saarka gastric acid, taas oo keenta dib u soo noqoshada. Markaa aad bay muhiim u tahay inaad iska ilaaliso cabbitaannada aalkolada leh si looga hortago soo noqoshada.
Mint iyo cuntooyinka dhadhanka reexaanta oo kale ah
Tani waa sababta oo ah reexaanta waxay ka xanaajin kartaa xuubka hunguriga iyo kordhinta reflux. Sababtan awgeed, waxaa lagula talinayaa in la baabi'iyo alaabooyinka ay ku jiraan dhadhanka reexaanta, oo ay ku jiraan nacnacyada, faleebada iyo reexaanta waxay naftooda ku daayaan xaaladdooda dabiiciga ah.
Talooyin kale si looga fogaado dib u soo noqoshada gastroesophageal
Marka lagu daro baabi'inta cuntooyinka iyo alaabooyinka wax u dhimi kara habka dheef-shiidkaaga xitaa in ka badan, waa muhiim isbedel ku samee caadooyinka si loo hagaajiyo xaaladda reflux gastroesophageal. Dhinaca kale, waa inaad bilowdaa cunto qani ku ah caanaha dufanku ku yar yahay, khudaarta, dufanka caafimaadka qaba, iyo kalluunka cad. Waxa kale oo aad muhiim u ah in la doorto habka ugu habboon ee wax lagu kariyo, iska ilaali cuntooyinka shiilan, suxuunta basbaaska leh ama suugo.
Cunista dhowr cunto fudud maalintii oo dhan waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u qabato dheefshiidka. Si la mid ah, waa inaad ka fogaataa cuntooyinka badan iyo kuwa culus, oo ay adag tahay dheefshiidka oo kordhiya dib u soo noqoshada. Ugu dambayn, noloshaada ka saar tubaakada sababtoo ah haddii ay jiraan sababo badan oo sidaas loo sameeyo, dib u soo noqoshada gastroesophageal waa wax dheeraad ah si meesha looga saaro xumeynta aadka u daran ee caafimaadka. Talooyinkan iyo kuwa uu bixiyo dhakhtarkaaga takhasuska leh, waxaad yareyn kartaa dhaawaca uu keeno dib u soo noqoshada gastroesophageal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Cudurada » Gastroesophageal reflux, waa maxay cuntooyinka ay tahay inaad iska ilaaliso